Kulanka -Man City iyo Man United Booliska Magalada oo dalbaday in saacada laga badalo %
Kulanka -Man City iyo Man United Booliska Magalada oo dalbaday in saacada laga badalo
Booliska Magaalada Manchester ayaa kala hadalay Xiriirka FA ga dalka England sidii Saacada looga badali lahaa kulanka darbiga ah ee dhex mari doona kooxaha Manchester City iyo Manchester united kaas oo ay macquul tahay in ay taageerayaasha City ugu dabaal degaan ku Guuleysiga Premier League.
Kulanka Labada Manchester ayaa ka dhici doona Garoonka Etihad Stadium bisha April 7 deeda waxaana labaasan doonaa saacada Magaalada Manchester marka ay tahay 5.30pm Sacadaas oo ah mid Gaaban oo habeenimo ayey Cayaartu dhamaan doontaa.
Afhayeen u hadlay booliska ayaa sheegay in hadii taageerayaasha Manchester City ay bilaabaan dabaal dega Horyaalka xili Habeen uu qal qal geli doono amaanka iyo isku socodka Magaalada sidaa daraadeed ayey u doonayaan Maalin weyn la Cayaaro si amnigu uusan faraha uga bixin.
Manchester City ayaa ku Guuleysan doonta Horyaalka e Premier League hadii ay ka badiyaan Manchester united Markaas oo kooxda Pep Guardiola loo caleemo saari doono ku Guuleysiga Horyaalka waxaana laga cabsi qabaa in ay dhacaan rabshado dhex mara Taageerayaasha labada kooxood marka uu bilaawdo dabaal dega weyn ee ay qorsheynayaa Taageerayaasha kooxda Man City.
Barcelona magaarto Pep Guardiola oo ka jawabay Su’aal laga waydiyay Man City
Gabdhaha ugu shidan ee ay dhaleen tababarayaasha iyo Cayaartoyda ugu caansan kubada cagta